I-Galaxy S8 ifumana uhlaziyo lwesoftware entsha kunye nokuphuculwa konxibelelwano | Iindaba zeGajethi
I-Galaxy S8 ifumana uhlaziyo lwesoftware entsha kunye nokuphuculwa konxibelelwano
Isamsung iqale ukusebenza ngokuqinile kuphuculo lwesoftware entsha Akukho mveliso ifunyenweyo y Akukho mveliso ifunyenweyo. Iziphumo zoku yi hlaziya ukuba izixhobo ezahlukeneyo ziqale ukufumana namhlanje kwaye enkosi apho kudityaniswa khona iziqwengana zokhuseleko, kunye nokuphuculwa konxibelelwano.
Enkosi kule yokugqibela siza kubona a i icon kwicala lasekhohlo kwibar yokukhangela eya kuvumela nawuphi na umsebenzisi ukuba afihle amaqhosha okuhambisa xa singaphakathi kwesicelo. Into enokubonakala ngathi yinto engabalulekanga yinto enomdla ngakumbi ngakumbi kuthi kuthi abo basebenzise ukuba ezi zitshixo zifihlwe okanye bakwazi ukuzifihla ngesandla.
Ewe, ukuba olu khetho aluqinisekisi kakhulu, i-Samsung iye yafuna ukusinika ithuba lokuyenza isebenze kwimenyu yezicwangciso.
Ngokufika kolu hlaziyo lutsha sinako sebenzisa usetyenziso kwimowudi yesikrini esigcweleyo, nangona zingadibani. Phakathi kwezinto ezingathandekiyo sifumana ukusikelwa umda kwemibala esinokuyisebenzisa njengemvelaphi yebha yokuhamba. Ngaphambi kokuba sikhethe nawuphi na umbala, kodwa ngoku sinokukhetha phakathi kweendlela ezisixhenxe.
Okwangoku uhlaziyo sele luqalisile ukuthunyelwa eIndiya ukuze ungakwazi ukuyikhuphela kwaye uyifake okwangoku, kodwa kulindeleke ukuba kwiiyure ezimbalwa okanye kwiintsuku ezimbalwa ezizayo ziqale ukufikelela kuyo yonke i-Galaxy S8 kunye neGPS S8 + ejikeleze umhlaba.
Ngaba ucinga ukuba i-S8 entsha kunye neGPS S8 + zifuna ukuphuculwa ngakumbi kunxibelelwano lwazo?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Galaxy S8 ifumana uhlaziyo lwesoftware entsha kunye nokuphuculwa konxibelelwano
Ubukrelekrele bokwenza into kaMicrosoft bufezekisa iPac-Man eyaziwayo